आज साउनको पहिलो सोमबारः संयोगले औंसी पनि, यसो गरे हुनेछ भाग्योदय ! – Sandesh Munch
आज साउनको पहिलो सोमबारः संयोगले औंसी पनि, यसो गरे हुनेछ भाग्योदय !
July 20, 2020 119
काठमाडौं । भगवान शिवको प्रिय महिना साउन र प्रिय बार सोमबार मानिन्छ । यस दिनमा शिवलाई मनपर्ने बेलपत्र, जल, पञ्चामृतद्वारा पूजाअर्चना गरिन्छ । साउन ५ गते (आज) पहिलो सोमबार परेको छ । यो महिना र दिन शिवको स्तुति मानव तथा चराचर जगतका लागि निकै कल्याणकारी रहन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहि आएको छ ।
यो सोमबार संयोगले औंसी पनि परेको छ । जुन सोमबारको दिन औंशी पर्दछ त्यहि दिनलाई सोमबारे औंशी भन्दछ, हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार हरेक सात दिनपछि एउटा सोमबार पर्दछ भने हरेक महिनामा एउटा औंशी । तर सोमवार र औंशी मात्रको संयोग भने कहिलेकाहि मात्र हुने गर्दछ ।
वर्षभरि एकचोटी या दुइचोटीसम्म सोमबारे औंशी पर्दछ । यो पर्व स्नान या भनौ दान दिनका लागि शुभ मानिन्छ । आजको दिनमा स्नानको लागि मात्र विभिन्न तिर्थस्टलमा टाढा टाढाबाट भक्तजनहरु धाउने गर्दछन । ‘सोमबारे औंशी’को दिनको तिथि प्राप्त गर्न ठुलो संयोग या भाग्य चाहिने उल्लेख भएको छ ।
महाभारतका पात्रहरुले पनि आफ्नो जीवनकालमा आजको दिन अर्थात सोमबारे औंशीको तिथि प्राप्त गर्न नसकेको भनाइ उल्लेख हुने गरेको बताइएको छ । हिन्दु शास्त्र अनुसार आजको दिन मौन रहेर स्नान र ध्यान गर्नाले पुण्य प्राप्त हुन्छ । सोमबार चन्द्रमाको दिन हो । चन्द्रमा मनको प्रतिक र सूर्य मस्तिष्कको प्रतिक पनि हो । सोमबारलाई शिवजीको दिन पनि मानिन्छ र आजको दिन भगवान शिवजी मै समर्पित छ ।
आजको दिन आराध्यदेव पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयहरुमा भक्तजनहरुको घुइचो लाग्ने गरेको भएपनि यसवर्ष भने महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण घरमै वा नजिकैको शिवालयमा पूजा आराधना गरिदैछ । साउनको सोमबार शिवलाई शुद्ध जल चढाएर खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ । साउनको सोमबार व्रत गरेमा मनको इच्छा पूरा भई अटल सौभाग्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ ।
पशुपति नखुल्ने, बाहिरैबाट दर्शन
आज पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनार्थीका लागि खुलेको छैन । साउन ७ गतेसम्म लकडाउन कायम रहेकाले मन्दिर नखुलेको हो । सरकारले तत्काल पशुपतिनाथ मन्दिर सर्वसाधरणको लागि खुला गर्ने निर्णय नगरेकाले मन्दिर खुला नगरिएको पशुपति बिकास कोषले जनाएको छ ।
लकडाउन खुकुलो भएसँगै बिस्तारै अन्य क्षेत्रहरु सामान्य अवस्थामा फर्किँदैछन् । तर, भिडभाड बढी हुने मठमन्दिर लगायतका क्षेत्र भने खुलेका छैनन् । मन्दिर खुला गर्ने, नगर्ने भन्ने सरकारको निर्णय कुरेर बसेको पशुपति क्षेत्र बिकास कोषका प्रशासकिय अधिकृत गौरीशंकर पराजुलीले बताए ।
उनले भने, आस्था भक्तिले आउनु भएका दर्शनार्थीलाई पूणतः रोक लगाउन त मिल्दैन । उहाँहरु आउनुभयो भने मन्दिर परिसरबाट दर्शन गरेर जान सक्नुहुन्छ । हाल मन्दिरमा नित्य पुजा मात्र भइरहेको उनले बताए ।
Prevबलिउड अभिनेता सलमान खान खेत जोत्दै गर्दा यस्तो अवस्थामा भेटीए (भिडियो)
Nextबाटोमा भेट्टाएको पैसाले तपाईंको भाग्य बदल्न सक्छ – वास्तुशास्त्र
लकडाउनमा मनग्य कमाउन चाहनुहुन्छ ? घरमै बसी गर्न सकिन्छ यी २० काम !
धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत। जानी राखै
आज – २७ साउन २०७७ मंगलवार को राशिफल
पम्फा भुसालको प्रश्न- आफ्ना चेलीको वास्ता छैन, विदेशीको चिन्ता लिएर बस्ने ?
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (83241)
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (27079)
अत्यन्तै दु:खद खबर : भर्खरै कोरोनाको कारण दक्षिण अफ्रिकामा नवजात शिशुको मृ’त्यु ! RIP !!!! (13123)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (12022)
खुशीको खबर ! अमेरिकाले निकालेको औषधीले बिरामी चट्ट निको भएको हुदा पुरा अमेरिका खुशीको सिमा छैन हेर्नुहोस (11763)
अमेरिकामा कोभिड-१९ को खोप वितरण गर्न सेना परिचालन गरिँदै (11310)
दुखद खबर! सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा सतर्कता! (10112)